Izindatshana zikaBob Croft zivuliwe Martech Zone |
Imibhalo nge UBob Croft
UBob Croft ungumholi we-martech wesipiliyoni esifundeni se-APAC, esebenza namakhasimende angaphezu kwe-15 kule minyaka engu-8 edlule ezimbonini eziningi.
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 11, i-2020 NgoLwesihlanu, January 22, 2021 UBob Croft
Lapho ama-imeyili equbuka kungadala ukuphazamiseka okuningi. Kubalulekile ukufika phansi kwayo - ngokushesha! Into yokuqala okufanele siqale ngayo ukuthola ukuqonda kwazo zonke izinto ezingena ekuthumeleni i-imeyili yakho ebhokisini lokungenayo… lokhu kufaka hlanhlanzeko yakho yedatha, idumela lakho le-IP, ukumiswa kwakho kwe-DNS (i-SPF ne-DKIM), okuqukethwe kwakho, nanoma yikuphi ukubika ku-imeyili yakho njengogaxekile. Nayi i-infographic enikezela nge
Lwesibili, Disemba 8, 2020 NgoLwesithathu, uDisemba 30, 2020 UBob Croft
Uma kukhulunywa ngokuthumela ama-imeyili nokwethula imikhankaso yokuthengisa ngama-imeyili, amaphuzu enhlangano yakho, noma idumela le-IP, abaluleke kakhulu. Eyaziwa nangokuthi amaphuzu omthumeli, idumela le-IP lithinta ukulethwa kwe-imeyili, futhi lokhu kubalulekile emkhankasweni we-imeyili ophumelelayo, nasekuxhumaneni kabanzi. Kulesi sihloko, sihlola izikolo ze-IP ngokuningiliziwe futhi sibheka ukuthi ungaligcina kanjani idumela le-IP eliqinile. Yini i-IP Score
NgoMsombuluko, Novemba 30, 2020 NgoMsombuluko, Novemba 30, 2020 UBob Croft
Ipulatifomu yokumaketha ezenzekelayo (i-MAP) yinoma iyiphi isoftware eyenza imisebenzi yokuthengisa. Amapulatifomu ngokuvamile ahlinzeka ngezinto ezishintshayo kuma-imeyili, imithombo yezokuxhumana, i-gen ehamba phambili, i-imeyili eqondile, iziteshi zokukhangisa ezidijithali kanye nabasebenzelana nabo. Amathuluzi ahlinzeka ngemininingwane emaphakathi yokumaketha yolwazi lokumaketha ukuze ukuxhumana kungabhekiswa kusetshenziswa ukwahlukaniswa nokwenza ngezifiso. Kunenzuzo enkulu ekutshalweni kwemali lapho amapulatifomu wokumaketha ezenzakalelayo esetshenziswa ngendlela efanele futhi evuselelwe ngokuphelele; kodwa-ke, amabhizinisi amaningi enza amaphutha ayisisekelo